Ityala le-DEAO kwi-16 ye-Automechanika Shanghai
Inkampani yethu iya kubamba i-16th Automechanika Shanghai kwi-National Exhibition kunye neZiko leNgqungquthela (eShanghai) ukusuka nge-2 ukuya ku-5 ku-05, ngo-2020
Enkosi kakhulu ngenkxaso yakho eqhubekayo kwinkampani yethu,
Ngesi sihlandlo, i-Changzhou Deao Vehicle Technology Co., Ltd. ingathanda ukwandisa isimemo sethu esisuka kuwe kwaye sijonge phambili kutyelelo lwakho.
Abangaphakathi kumzi mveliso abangakwaziyo ukundwendwela indawo ngenxa yezithintelo zohambo banokuthatha inxaxheba kulo msitho weshishini leemoto kwihlabathi liphela ngeqonga le-AMS Live online, eliza kuvulwa ukusuka nge-30 kaNovemba ukuya kwi-6 kaDisemba. abaphulaphuli baphesheya abangakwaziyo ukuya kwindawo yesehlo.
I-16 ye-Automechanika Shanghai kulindeleke ukuba itsale malunga nababonisi abangama-3,900 abasuka kwicandelo lonke lezithuthi, benendawo yomboniso iyonke engama-280,000 eemitha zesikwere. Lo mboniso uza kugxila ngokupheleleyo kumxholo othi "Ukwakha i-ecosystem yezithuthi zexesha elizayo", ukwandisa nokuphucula amacandelo aphambili asixhenxe kunye nemimandla emithathu ekhethekileyo, kunye nokukhuthaza ukudityaniswa kwezixhobo zorhwebo kunye nophuhliso lwemida yokuwela ubuchwephesha.
Okwangoku, iAutomechanika Shanghai ngowona mboniso mkhulu emva kwemoto phakathi kweAsia. Ngumboniso ojonge phambili kakhulu, okhokelela kushishino lweemoto ekhaya nakumazwe aphesheya ngokubhekisele kwikamva lobuchwephesha kuphuhliso lobuchwephesha. Ibandakanya ezona nkonzo zahlukeneyo zentengiso, kwaye iqulethe ubutyebi bolwazi lwentengiso.
Njengomboniso wamazwe aphesheya, i-Automechanika Shanghai isinika indlela ebaluleke kakhulu yokuphonononga iimarike ezisakhulayo kunye nokuseka unxibelelwano olusondeleyo kunye nabathengi.
Ngeli xesha sizise imveliso yokuthengisa ephambili ye-TPE yemethi kunye nezinye izinto ezizenzekelayo, ngethemba lokwandisa intengiso yentengiso, kwaye kwangaxeshanye unxibelelana ngakumbi nabathengi bethu abangasetyenziswanga. Oku kunendima efanelekileyo ekhokelayo kuphuhliso olulandelayo lwenkampani yethu, ukuze siqonde amathuba emarike kunye namathuba.
Ngoku intengiso yemoto iye yangenisa utshintsho kwikhulu lenkulungwane. Ngokuthatha inxaxheba kwi-Automechanika Shanghai, sinokuhlangabezana ngcono nemiceli mngeni kwaye siqonde ulwalathiso lophuhliso lwentengiso kwikamva.